कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ मा फेरिएका ५ कुरा – Media Kurakani
कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ मा फेरिएका ५ कुरा
August 7th, 2016 Media Kurakani Media News
२०७३ बैशाख ११ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनमा सुरु भएको लाइभ कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ मा सरकार परिवर्तनसँगै केही परिवर्तनहरु देखिएका छन्। कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ नेपाल टेलिभिजन र एनटिभी समाचारबाट हरेक शनिबार राति पौने ९ बजे ४५ मिनेट प्रसारण हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा सुरु भएको यो कार्यक्रम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएसँगै केही परिवर्तन भएको हो। यो कार्यक्रममा के के परिवर्तन भए हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदै छौँ।
१) प्रस्तोता परिवर्तन
सुरुदेखि कार्यक्रमका प्रस्तोता थिए रवि लामिछाने। तर साउन २२ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको कार्यक्रममा नयाँ प्रस्तोता आए बबिन शर्मा। विश्वको सबैभन्दा लामो लाइभ टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई रिप्लेस गर्ने पत्रकार बबिन शर्मा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरका प्रेस सल्लाहकारसमेत हुन्। नेपाल टेलिभिजनको लगानी रहेको यो कार्यक्रममा प्रस्तोता परिवर्तन स्वभाविक हो वा अस्वभाविक? लामिछानेले फेसबुकमा ‘छापामार शैलीमा कार्यक्रम लुटिएको’ आरोप लगाएपछि यसबारे सोसल मिडियामा बहस भएको छ। उनले यसबारे सेतोपाटीमा लेख नै लेखेका छन्।
रवि लामिछाने। फोटोः लामिछानेको फेसबुकबाट।
२) लोगोमा परिवर्तन
कार्यक्रमको सुरुमा आउने लोगोमा ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ को माथिपट्टी लेखिएको हुन्थ्यो- A Premium Show with Rabi Lamichhane। प्रस्तोता परिवर्तन भएपछि पछिल्लो कार्यक्रममा लोगोबाट यो हटाइएको छ।
३) बजेन विज्ञापन
यसअघिका कार्यक्रमहरुमा विज्ञापन बज्थे तर साउन २२ गतेको कार्यक्रममा भने विज्ञापन बजेनन्। कार्यक्रमलाई वेलकम एड्भर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ प्रालिले स्पोन्सर गरेको थियो। (प्रधानमन्त्रीसँगको लाइभ अन्तर्क्रियामा विज्ञापन नबजाउनु नै राम्रो, नयाँ टिमले ध्यान दिने कि?)
४) वेबसाइट गायब
रवि लामिछानेले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा sidhakurapmsanga.com वेबसाइट थियो, जहाँ युट्युब भिडियोको संग्रह पनि राखिन्थ्यो। तर साउन २२ को कार्यक्रममा यो वेबसाइट देखाइएन। अहिले त्यो वेबसाइटमा जाने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गरिएको व्यंग्य पढ्न पाइन्छ। वेबसाइटमा लेखिएको छ- ‘स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालित यो कार्यक्रम कुनै राजनीतिक पार्टीमा आस्था नराख्दा समेत हाम्रो समूहबाट सञ्चालन नगर्ने नव निर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्रूज्यूको निर्णयलाई धन्यवाद।’ वेबसाइट केही समयका लागि बन्द गरिएको लेखिएको छ। यसको अर्थ यो वेबसाइट पूरानै टिमसँग छ।
५) फेरियो सेट
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जुन सेटमा कार्यक्रम गरिन्थ्यो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो सेट फेरिएको छ।
र, अन्त्यमा रह्‍यो कुरा विवादको।
सरकार परिवर्तनसँगै एउटा चर्चित कार्यक्रमका प्रस्तोता परिवर्तन हुनु आकस्मिकता हो वा योजना उनीहरु नै जानुन् तर एउटा सत्य के हो भने यो कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनको लगानी थियो/छ। कार्यक्रमहरुका अन्तिममा सर्वाधिकार नेपाल टेलिभिजनमै रहेको भनेर देखाइन्थ्यो। त्यसैले यस विषयमा नेपाल टेलिभिजन चुप बस्न मिल्दैन कि? नेपाल टेलिभिजन, कार्यक्रम स्पोन्सर गरेको वेलकम एड्भर्टाइजिङ र प्रस्तोता लामिछानेबीच कार्यक्रम सुरु गर्दा के कस्ता सहमति/सम्झौता भएका थिए सार्वजनिक गर्ने कि? प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा गर्नेहरुले पक्कै पनि लिखित सम्झौता त गरेकै होलान्।
यसबारे तपाईँको विचार व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईँले पनि कार्यक्रममा फेरिएका केही कुरा देख्नुभयो कि? कार्यक्रमका भिडियो यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ।
Tags Babin Sharma KP Sharma Oli Nepal Television NTV PM Saga Sidha Kura Prachanda Rabi Lamichhane
पत्रकार बन्न अब लिनुपर्ने छ लाइसेन्स, यस्तो छ प्रस्तावित पाठ्यक्रम »
« विज्ञापन ल्याउने समाचारपत्रको काइदा, यसरी झुक्यायो पाठकलाई